Tronsmart သည်ပထမဆုံးသောနားကြပ်ကို Coronavirus Sterilization System ဖြင့်စတင်ခဲ့သည် Androidsis
coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားသောအဆိုးရွားဆုံးကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုသည်လွန်သွားပြီးလူအများသန့်ရှင်းရေးအစီအမံများကိုလျစ်လျူရှုခြင်းမရှိဘဲပုံမှန်အခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်ကြိုးစားနေကြသည့်နိုင်ငံများဖြစ်သည့်အခါ၊ ကျနော်တို့အသစ်တစ်ခုအဖြစ်မှန်မှလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေကြသည်.
ဤအဖြစ်မှန်အသစ်သည်စမတ်ဖုန်းများ၊ စမတ်နာရီများသို့မဟုတ်နားကြပ်များဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများကိုလည်းထိခိုက်သည်။ နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်တွင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Tronsmart ၏ Onyx Free နားကြပ်များအကြောင်းပြောသော Qualcomm နှင့်၎င်း၏ပထမဆုံးသော True Wireless နားကြပ်အကြောင်း တစ် ဦး ခရမ်းလွန်ပိုးသတ်စနစ်ကပေါင်းစပ် ဘတ်ထရီအားသွင်းခြင်းတွင်သိုလှောင်ထားသည့်အခါ၎င်းသည်ဘက်တီးရီးယားအားလုံး၏သဲလွန်စများကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။
Tronsmart Onyx အသစ်သည်က နားကြပ်များအတွက်ခရမ်းလွန်ပိုးသတ်စနစ် စက္ကန့် ၆၀ အတွင်းမှာသူတို့တွေ့နိုင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားအားလုံးကိုပိုးသတ်ပစ်လိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့အကြိုက်ဆုံးဂီတကိုခံစားတဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကကူးစက်ခံရမှာကိုကြောက်ခြင်းကြောင့်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။
Qualcomm သည်ဤပိုးမွှားသန့်စင်သည့်စနစ်နောက်ကွယ်တွင်သာမက၎င်းကိုနောက်ကွယ်မှလည်းတွေ့ရှိနိုင်သည် ဒီနားကြပ်များကအသုံးပြုနည်းပညာ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနိမ့်ကျခြင်း၊ အမြန်နှုန်းနိမ့်ခြင်း၊
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းကိုနားထောင်နေစဉ်အားကစားကိုနှစ်သက်လိုပါက Tronsmart Onyx Free နှင့်အတူသင်လုပ်နိုင်သည်မှာ IPX7 လက်မှတ်၎င်းကိုရေအောက်တွင်တစ်မီတာအထိအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသည့်လက်မှတ်။
ဤနားကြပ်အသစ်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ရန် Tronsmart သည် Panasonic ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းထားသည် ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောနားကြပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏နားများ၏ခံစားချက်ကို ၇၁% အထိလျှော့ချပေးသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Tronsmart ၏ Onyx အခမဲ့သည် aptx အသံ format နဲ့သဟဇာတQualcomm မှဂီတကိုမူရင်းအရည်အသွေးဖြင့်ပေးပို့ရန်နှင့်အနက်ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ပုံစံသည်ရိုးရှင်းသောဘလူးတုဆက်သွယ်မှုများ၏အခက်အခဲကြောင့် bandwidth နိမ့်ကျခြင်းကိုရှောင်ရှားသည်။
1 Tronsmart Onyx အခမဲ့၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်
Tronsmart Onyx အခမဲ့၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်
ဒီနားကြပ်အသစ်ကထူးခြားတဲ့အသံအရည်အသွေးကိုခံစားနိုင်ရုံသာမကငါတို့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကိုပါခံစားခွင့်ရစေတယ်7နာရီနှင့်စုစုပေါင်း 35 နာရီ အားသွင်းအမှု၏အသုံးပြုမှုအောင်။
စျေးကွက်ထဲတွင်တွေ့နိုင်သည့် True Wireless နားကြပ်မော်ဒယ်များနှင့်မတူဘဲ၊ နားကြပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည် ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောတေးဂီတ (သို့) podcast ကိုနားထောင်ရန်၊ စကားပြောဆိုရန် (သို့) စမတ်ဖုန်း၏လက်ထောက်နှင့်ဆက်သွယ်ရန် mono သို့မဟုတ် stereo mode တွင်ရှိသည်။
အသစ်များ Tronsmart ၏ Onyx Free ၏တန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ ၃၄.၉၉ ဖြစ်သည်ဖြစ်လိမ့်မည်စျေးနှုန်း ယနေ့မှဇွန်လ 1 သည်အထိရရှိနိုင်ပါ ကူပွန် ONYXFREE ကိုအသုံးပြုခြင်း။
ပထမ ဦး ဆုံးနားကြပ်နှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ခရမ်းလွန်ပိုးသတ်စနစ်, သင်အားဖြင့်ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ် အောက်ပါလင့်ခ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » Tronsmart သည်ပထမဆုံးသောနားကြပ်ကို coronavirus ဆန့်ကျင်သောပိုးကင်းသည့်စနစ်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်
Telegram မှာ Dark Mode ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ